Profile Company - Shenzhen KTC Technology Group
Adeegga & Support
Company Profile Madaxweynaha ayaa qudbad Enterprise Dhaqanka Sharafbadanyahay Certificates Brand Story Cooperative Mode Sawirada Warshada Video Hordhac Hawlaha Shaqaalaha Heesta KTC
Interactive Flat Panel CCTV Monitor Ganacsiga TV Digital calaamado Monitor Professional
Display Qalliinka Endoscopic
Gudiyada gobol- Display
Xarunta Display Consultation
Muuqaalka Sawirka Ultrasound
Function Multi Health baare
LED TV Muujiya Commercial Muujiya Medical
R & D Dept. Qaabdhismeedka R & D Electric Dept. R & D Software Dept. R & D Product Dept.
Hordhaca R & D Dept.
Ka dib markii Service Sale Terms damaanad
Information Contact Bank Information Consultation & dacwad Map (KTC Shenzhen) Khariidad (KTC Huizhou)
Home / About KTC / Company Profile
Shenzhen KTC Technology Group (halkan loogu yeeri sida "KTC"), la aasaasay sanadkii 1995 oo xarunteeduna tahay magaalada Shenzhen, takhasusay soo saarka ee guddiga guri waxyaabaha bandhigay terminal. Waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu horreeya ee kormeerayaasha LCD, telefishinada LCD, boosteejada LCD ganacsiga iyo boosteejada LCD caafimaad ee Shiinaha.
Currently, Group waxay leedahay in ka badan 6,000 oo shaqaale ah, iyo beeraha warshadaha wax soo saarka caaqil ee Shenzhen oo Huizhou, iyadoo meel dabaqa guud ee 400,000㎡. Group The inta badan ka kooban yahay Shenzhen KTC Technology Co., Ltd., Display Shenzhen KTC Commercial Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Intelligent Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Medical Solutions Co., Ltd., Huizhou KTC Technology Co. , Ltd., Hong Kong KTC Technology Co., Ltd., iwm
Had iyo jeer u hoggaansanaayeen fikrad ganacsi oo ka mid ah "Dhaqangelinta Management Integrity, iyo Focus on Tayada iyo Service", KTC waxaa ka go'an inuu siiyo alaabta oo tayo sare leh iyo adeegga macaamiisha leh heerka ugu sareeya. Waxay xoojisaa dhiska tayada iyo ilaalinta deegaanka, waxaana uu aasaasay nidaamka maareynta fasalka-koowaad. KTC ayaa shahaado hoos ISO9001 SGS ah: 2015 nidaamka maareynta tayo leh, ISO14001 SGS ah: 2015 nidaam maamulidda deegaanka, SGS ANSI / ESD S20.20-2014 caadiga ah dheecaan electrostatic ah, Xeerka Electronic Industry of Conduct (EICC), is-dhexgalka ee informatization iyo hababka maaraynta warshadaha, iwm
Products of KTC Group ayaa maray caddeyn gudaha iyo dibada badan sida CCC, TCO03, CE, CB, FCC, UL, dalkaas, TUV, ROHS, Energy Star, iyo CECP. Sidoo kale, KTC aadka u qiimeeyo maamulka gudaha iyo dajisay nidaamka PDM, ERP, CRM, SCM iyo maamulka Mes dhawaaqa.
Sida ganacsi qaran hi-tech iyo R farsamo la aqoonsan yahay iyo xarunta D ee Shenzhen, KTC ayaa sameeyay R a dhawaaqa & nidaamka D - KTC Technology Center, iyada oo in ka badan labaatan sano oo maal-joogto iyo horumarka. Xaruntani waxay fulisaa howlgalka cilmi asaasiga ah iyo hor-dhamaadka technology iyo horumarinta, horumarka cusub ee wax soo saarka iyo hagaajinta warshadaha. Its R & D naqshadaha ka kooban yahay dhismayaasha, korontada, Software, indhaha, Technology iyo Product Departments iyo Imtixaanka & tijaabooyin Center, taas oo uu leeyahay boqolaal R & D injineerada iyo indheer-xirfadeed warshadaha bandhigay terminal ka guddi guri. Kasta R & D waaxda hoos Center Technology loo xilsaaro hawlo ay ka soo jeedaan, fulisaa horumarka iskaashi la iskaashi nidaamka sare maamulka horumarinta (nidaamka PDM), iyo raad arrimuhu horumarinta technology warshadaha ah. Ay darajo awood R & D heerka iyo tayada kormeer ka mid fiican in industry ee.
Daryeelidda koritaanka iyo horumarka ee qof kasta oo shaqaale, KTC ayaa guulaha fiican ee la gelin caasimada tababarka tayo xirfad leh, iyo in la aasaaso Farsamada xirfad farsamo maaraynta niyad, iwm .; waxaa si joogto ah kor u dhiso koox tayo iyo dhigaysa dadaal weyn si ay u soo jiitaan iyo tababar shaqaale xirfad dheeraad ah, shaqaale-heerkiisa sare iyo khubaro farsamo. Iyada oo University KTC, barnaamijka cusub kudayasho shaqaale, barnaamijka laf cusub, tababarayaal gudaha, koox xiisaha, tababar dibada ah iyo barnaamijyada kale ee tababarrada, KTC caawiyaa shaqaalaha si ay ugaaraan qorshaynta iyo xirfado is-hagaajinta, dhiiri furitaankii xirfadeed, xirfad horumarinta, iyo hal-abuurka iyo hal-abuur. KTC waxaa u sharrifnay Binii "nin saanac ahu Tababarka Company Model ee Shenzhen" iyo "Heer Enterprise fulinta Masuuliyada Bulshada".
Tan iyo KTC galay beertii kormeerayaasha PC in horraantii 1990, waxaa la dadaal hagar Eebhaa tayo sare leh iyada oo loo marayo maareynta ganacsi hufan, farsamada fiican iyo adeegga shakhsi, oo muujinaya tartan weyn oo duurka ku soo bandhigay guddiga guriga smart. Company ayaa israac sharfay sida "Top 100 Electronic Information Enterprises ee Shiinaha", "2008 Forbes Shiinaha 200 UP-IYO-kagama", "Top 10 Color TV dhoofinta Shirkadda Shiinaha ee", "Top 500 Warshadaha Enterprises ee gaarka loo leeyahay ee China", " top 100 warshadaha Enterprises ee Guangdong "," top 100 Industrial Enterprises ee Shenzhen "," top 100 Independent Innovation Enterprises ee Shenzhen "," Shirkado ODM Best of Qalabka LCD Commercial ", iwm, taas oo uu keenay saamayn bulsho wanaagsan iyo saamaynta.
waxyaabaha smart KTC ee waxaa loo iibiyey in dalalka iyo gobollada ee South America, North America, Europe, Africa, Australia, iyo Asia. Company ayaa aasaasay a network iibka deggan iyo loo dayactiro xiriirka iskaashi fiican la shirkadaha caanka ah gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Muddo sanado ah, kuwaas oo, KTC ku been abuurtay nidaam dhamaystiran oo sanqadha adeegyada gudaha iyo dibada-iibka ka dib.
Sida bandhigay guddiga guri galo marxalad digital, caqli iyo network-ku salaysan cusub, KTC ayaa waxaa loo kordhiyay in telefishinada smart, qaab caafimaad, qaab ganacsi iyo beero kale iyada oo loo marayo hal-abuurka joogto ah, xalkaas ka technology asaasiga ah, iyo Qaybinta adeegga iyo ahaanayta. Waxa uu noqday mid ka mid ah Top 100 Electronic Enterprises Information ee Shiinaha. Iyada oo ah R & D nidaamka madax banaan iyo faa'iidooyinka farsamada, Company ayaa aqoonsan sida ganacsi qaran hi-tech iyo R degmada & xarunta D ee Shenzhen. Waxaa sidoo kale si firfircoon uga sahaminta noocyo gancsiga oo cusub iyo in la abuuro shuruudo cusub. Iyada oo ku saleysan alaabta iyo adeegyada kala duwan iyo habka, Fashay in la furo ilaa rajada cusub ee koritaanka iibka iyo in la dhiso iyo si joogto ah loo hagaajiyo waxgarasho leh nidaamka wax soo saarka iyo qoyska wax soo saarka, sidaas ka dhigaan aasaaskii ah horumarka shirkadaha joogto ah.
Raadinta mustaqbalka, KTC doonaa, iyadoo image cusub oo u hoggaansanaayeen fikirka adeeg ah "Macaamiisha First iyo abuurtaa kalgacayl", si joogto ah kor loogu qaado awooddeeda in horumarka cusub, iyo in la dhiso iyo in la wanaajiyo nidaamka wax soo saarka caaqil, sidaas si ay u siiyaan macaamiisha sare -quality waxyaabaha bandhigay smart iyo xal. Iyada oo fikirka ah "Technology wanaajinaysaa Our Life", Company la heleyna xagga baaxadda weyn oo heer sare, isku dayeen in ay noqdaan heer caalami saaraha xirfadle ah waxyaabaha soo bandhigay guddiga guri smart.
Bandhigga Ganacsiga ee KTC
Hagaajinta Xaaladda Living la Technology
Xuquuqda daabacaadda © 2019 Shenzhen KTC Teknolojiyadda Kooxda Dhammaan Xuquuqda Leh.
E-mail Site Map Shuruudaha isticmaalka siyaasadda Privacy
maalmood oo shaqo: